Gavhuna weRBZ Anoti Dhora reZimbabwe Harina Dambudziko Asi Nyanzvi Dzichipikisa
Jgavhuna weRBZ Doctor John Panonetsa Mangudya.
Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Doctor John Mangudya vanoti hapana chakaipa kuti nyika irambe ichishandisa dhora remunyika riri kunzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi rave kunyanya kushaya simba zvekuti zviri nani kungoshandisa rekuAmerica sezvakamboitwa kare.
VaMangudya vaudza Studio 7 kuti hongu dhora rekuAmerica rakamboshandiswa asi mari yacho chaiyo munyika mainge musina zvaizopa kuti vanhu vambopihwe makuponi nezvimwe. Gavhuna weRBZ atiwo vanhu vanokwanisa kushandisa madhora ekunze pane zvimwe zvakaita sekutenga zvinhu kunze kwenyika.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi Muzvinfundo Gift Mugano vati dhora remunyika harichisina simba nekudaro kuda kuti rirambe richishandiswa kukokera mhepo wakatakura mamera murusero.
Dhora remunyika pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction riri kutengeswa nemadhora zana nemakumi mana nemasere kana kuti US1: ZWS148, 87.
Asi pamusika wemukoto dhora remunyika riri kutengwa nemari inodarika mazana matatu kana kuti US$1: ZW$300.
Izvi zvinonzi zvave kupa kuti zvinhu munyika zvirambe zvichidhura sezvo vemuzvitoro vachitengesa zvinhu vachishandisa mari yepamusika wemukoto sechikero.
Asi gurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanoti zvinhu zvave kukwira nekuda kwehondo yekuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia.
Kunyika idzi kunotengwa chibage, gorosi, mafuta ekufambisa dzimotokari nefotereza. Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti zvinhu zvange zvatotanga kuenda kumawere muZimbabwre hondo isati yambotanga.
Hurukuro naMuzvinfundo Gift Mugano